Global Voices teny Malagasy » Fahafahana Vonjimaika Ho An’ilay Mpanao Gazety Indiana Naveen Soorinje. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Avrily 2013 17:28 GMT 1	 · Mpanoratra Aparna Ray Nandika (fr) i P.Baker, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora
Nosamborina tamin'ny 7 Novambra 2012 i Naveen Soorinje, mpanao gazety amin'ny fahitalavitra raha namoaka ilay loza niseho momba ny “fitondra-tena”  izay nahavoarohirohy ireo mpikambana ao amin'ny ankavia hindoue Jagaran Vedike ho nana herisetra tamin'ireo tanora lehilahy sy vehivavy ao Mangalore, India. Nahazo fahafahana vonjimaika  avy amin'ny Fitsarana Ambony Karnataka ihany anefa izy.
Fotoana fohy taty aoriana anefa, mpisetrasetra 30 no nipoitra tampoka tao amin'ilay toerana ary araka ny fomba fitantarany nampiasany ny mpisolo anarana voalohany (fanondroany ny tenany ihany) , niezaka niantso polisy i Soorinje saingy tsy nisy namaly mihitsy. Nalain'i Soorinje sary avy eo ny fanafihana niseho, ary nalefa tao amin'ny fahitalavitra ao an-toerana sy ny fahitalavi-panjakana ilay lahatsary afaka fotoana fohy, ka nahasarika ny sain'ireo mponina tao amin'ny firenena ilay loza mahatsiravina niseho.
Satria maro tamin'ireo mpanafika no hita tamin'ny lahatsary ny tavany (tsy nisaron-tava), nampanantsoin'ny polisy avy eo  i Soorinje tamin'ny 7 novambra 2012 ary voampanga ho nandray anjara tamin'ny fanomanana ny fanafihana. Nosamborina izy araka ny voafaritr'ireo fehezan-dalàna famaizana indiana marobe, anisan'izany ny fikambanana mpanao ratsy, famoriam-bahoaka tsy nahazoan-dalana, fidirana an-keriny ao amin'ny tanin'olona, fandraisana anjara amin'ny fikomiam-bahoaka miaraka amin'ny fitaova-piadiana mahafaty ary fampiasan-kery amin'ny vehivavy miampy fikasana hanolana. Voalaza fa nanitsakitsaka ny lalàna mandràra “ny fampahafantarana tsy mendrika ireo vehivavy” ihany koa izy”.
Nolavin'i Soorinje anefa ireo fiampangana azy ireo ary nilaza izy fa ny asany no nataony. Tamin'ny fitantarany amin'ny teny anglisy izay navoaka tao amin'ny The Hoot, hoy izy nanoratra :
Tamin'ny filazana tsy an-kiato fa tsy nahavita heloka izy fa ny asany amin'ny maha mpitati-baovao no nataony tamin'ny fangalan-tsary (sy famoahana) ny zava-niseho, nanao fanentanana manohitra ny politikam-pitantanana izay mikasa “hanasazy ny mpitondra hafatra” ny fianakaviamben'ny mpanao gazety, ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, ny mpikatroka ny zon'olombelona ary ny mpiserasera. Ary nanatontosa fanangonan-tsonia  ho fitakiana ny famotsorana azy sy ny fanesorana  ireo fiampangana rehetra hanenjehana ity mpanao gazety ity izy ireo.
Tamin'ny volana desambra, nolavina ny fangatahany fahafahana vonjimaika, ary mbola niaro tena  nisambotra mpanao gazety hafa tonga nanatrika ny loza ny polisy. Na dia izany aza, nihanahazo vahana  ny fanentanana sy ny hetsi-panoherana ka nanapa-kevitra hanaisotra ireo fiampangana hanenjehana an'i Soorinje ihany ny governemanta. Vaovao mahafaly ny fanambarana momba ny fahazoany fahafahana vonjimaika ary nihevitra mihitsy aza ity mpitati-baovao ity fa “afaka madiodio” izy.
Geeta Seshu (@geetaseshu ) : Vaovao mahafaly: nahazo fahafahana vonjimaika avy amin'ny lehiben'ny mpitsara shridhar ao ao amin'ny fitsarana ambony karnataka i Naveen soorinje, ilay nitantara momba ny mangalore.
Dhanya Rajendran (@dhanyarajendran ) : Neken'ny Fitsarana Ambony ny fangatahana fahafahana vonjimaika ho an'ilay mpanao gazety Naveen Soorinje ! Nanambitana i Naveen manana namana niady mafy ho amin'ny famotsorana azy
Kamayani (@kracktivist ) : HOURRAAAAH VAOVAO TSARA NAHAZO FAHAFAHANA VONJIMAIKA I NAVEEN 🙂 http://fb.me/2cKIIZhHS 
G. Vishnu (@geevishnu ) : Nahazo fahafahana vonjimaika i Naveen Soorinje!!! Kanefa…toa mbola eo am-panombohana ny tolona .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/04/47142/
 ny “fitondra-tena”: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Mangalore_Homestay_attack
 fahafahana vonjimaika: http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=167625
 araka ny fomba fitantarany nampiasany ny mpisolo anarana voalohany (fanondroany ny tenany ihany): http://www.thehoot.org/web/Messengers-in-the-dock/6137-1-1-6-true.html
 hanasazy ny mpitondra hafatra” : http://www.thehindu.com/news/cities/Mangalore/article3700530.ece
 niaro tena: http://www.thehoot.org/web/Mangalore-police-defend-action-against-TV-reporters/6561-1-1-6-true.html
 nihanahazo vahana: http://www.newzfirst.com/web/guest/full-story/-/asset_publisher/Qd8l/content/home-stay-attack:-civil-society-groups-to-fast-demanding-journalist%E2%80%99s-release?redirect=/web/guest/full%20story